Varotra amoron-dalana: vahaolana hitan’ny Sinoa | NewsMada
Varotra amoron-dalana: vahaolana hitan’ny Sinoa
Varotra amoron-dalana no vahaolana hitan’ny fanjakana sinoa noho ny fahaverezan’asa be loatra vokatry ny aretina Covid-19. Nahatratra anetsiny ny karazan’asa niforona tao anatin’ny herinandro vitsivitsy, nahitana mpivarotra amoron-dalana 36 000. Sakafo masaka, voankazo, kiraro… hita niverina feno namidy amoron-dalana any ammin’ny faritra andrefan’i Sina.
Ireo mpitondra sinoa nanome tsiny ny mpivarotra amoron-dalana fototry ny ratsy rehetra, niverina amin’ny fanapahan-keviny izao hamonjy ireo tsy an’asa any aminy. 20 % ireo tsy an’asa ireo, indrindra fa ny mpifindra monina very asa nefa tsy afaka manantena fanampiana avy amin’ny fanjakana. Tsy mitaky fari-pahaizana, tsy mila volabe ihany koa. Nandritra ny fihibohana, ireo tompon’ny tranombarotra mikatona ihany no mamoaka ny entany amidy eny amoron-dalana. Io ny fiantohana azo antoka ho an’ny mahantra maro anisa.
Sahirana ny mponina maro an-tanàn-dehibe raha tsy misy ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Mora kokoa ny vidim-piainana amin’ny entana amidin’izy ireo. Hita izany, ohatra, amin’ny tanàn-dehibe maro any Azia, ady amin’ny tsy fahampian-tsakafo ho an’ireo ambany fahefa-mividy. Manamarina ny maha antoka lehibe ireo mpivarotra amoron-dalana ireo i Caroline Skinner, mpanadihady ny zava-misy an-tanàn-dehibe ao amin’ny ONG Wiego, mpiaro ny zon’ny mpiasa « informel » ao Afrika Atsimo. Efa niainana tany Azia izany nandritra ny krizy ara-toekarena tamin’ny 1997.